News - Qalabka cusub ee BMW 3 Taxanaha sare ee kabaalka qalabka korontada lagu xiro?
Tan iyo markii la bilaabay moodooyinka BMW oo leh sumadda G chassis, badhamada ayaa lagu dhex daray aagga wareejinta, iyagoo noo keenaya fikrado badan oo cusub. Isku-darka bilawga hal-batoon, bilow-joogsi otomaatig ah, habka wadista, iyo gacan-qabsiga elektaroonigga ah ayaa leh dareen teknoolojiyad ka xoog badan aagga wareejinta.
Laakiin aaggan, waxa ina siinaya saameynta ugu weyn ee muuqaalka waa lever elektronik ah oo lever elektronik ah, kaas oo aad u fiican oo ay ka buuxaan tiknoolajiyaddu. Waxaad ka heli kartaa "lever gear lever" 8 taxane ah, X5, iyo X6. Gudaha taxanaha cusub ee BMW 3 wuxuu ku qalabeysan yahay lever elektaroonik ah oo lever elektiroonig ah. Mankaleilab wuxuu aad ula socdaa fursadaha ganacsiga wuxuuna soo saaray noocyo kala duwan oo isku mid ah, oo "3" ay ku xardhan tahay gudaha gudaha, taas oo la mid ah qaabka wareejinta kabaalka 8 taxane ah. Waxaan rajeyneynaa in BMW ay soo saari doonto qaybo badan oo beddelaad wanaagsan mustaqbalka, milkiilayaasha baabuurtuna had iyo jeer waxay ku raaxeysan doonaan qaybaha la xiriira.